Kol. Gammachuu hatatamaan bakka akka jijjiiru manni murtii ajaja kennen gara mana hidhaa qilinxoo bakka duraan turetti deebifamaniru – Kichuu
Kol. Gammachuu hatatamaan bakka akka jijjiiru manni murtii ajaja kennen gara mana hidhaa qilinxoo bakka duraan turetti deebifamaniru
Kol. Gammachuu hatatamaan bakka akka jijjiiru manni murtii ajaja kennen gara mana hidhaa qilinxoo bakka duraan turetti deebifamaniru.
Olmaa Manni murtii dhaddacha liidataa hardha ooleen Polisiin
Kol. Gammachuu hatatamaan bakka akka jijjiiru manni murtii ajaja kennen gara mana hidhaa qilinxoo bakka duraan turetti deebifamaniru jechuunis Qilinxoo bakka warri galmee isa jalatti himataman jiranitti.
Kutannoo fi cichoomina Hayyoonni keenya jawaar Mohammed ffaan taasisan milkaa’eera
Har’a manni murtii Federal Himata Koleneel Gammachuu Ayyaanaa fi namoota isa waliin galmee tokko irra jiran Oromota 19 irratti baname yeroo ilaalan irratti argameen ture. Jalqaba irratti iyyatni Koloneel Gammachuu bakka hidhaa akka jijjiramuufiif galchatee ture murtee argatee Koloneel Gammachuun akka bakka fooya’aa ta’etti akka jijjiiram ajjani kennameef. Murteen dabres hojiiirra ooluu isaa fi dhiisuu gara fuula duraatti kan ilaalamu ta’a.
Akkan fuula hidhamtoota, Koloneel Gammachuu dabalatee irraa hubadhetti hamilee gaarii akka qaban irraa hubachuu danda’eera. Koloneel Gammachuun Fayyaa isaa ti. Akka mallatoon natti himetti cimaa isaatu jira. Haa ta’u malee namootni isaaniifi danda’ame hidhamtoota kana jajjabeessun barbaachisaa dha. Beelamni itti aanuu guyyota lama itti aanan akka ragaan dhageefatamu ajjajni kennamee dhadachii har’aa xumurameera..
Day 4 of hunger strike at Galaan police station
Hardha Jaal Kennasaa, Jaal Mikaa’el fi Obsaa Abdiisaa deemnee dubbifnee turre. Jaal kennasaan fuulumaan nutti muldhatanii oldeebi’an. Baay’ee laafanii jiru. Jaal Mikaa’els laafanii jiru garuu hin wayyu. Dhaabbachuu waan hin dandeenneef, teessoon kaayameefii nudubbisani. Obsaallee isaaniin wajjiin osoo hin taane kutaa biraa keessa jira. Osomaa nuti achi jirru maatiin nyaata fidanii, haga deebii argannutti lagannaa ittuma fufna, isin hin dhufinaa jedhanii maatiitti dhaamaa turan. Hanga wateegama lubbuuttis kafaluuf qabsoo kanaitti seeenne waan ta’eef hin rakkatinaa jedhani.. Justice for all political prisoners!! Rabbi isaan wajjiin haa jiraatu.!!